निर्जीवन बीमा Archives » aarthikplus
नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ईश्वर पोखरेललाई जिम्मेवारी
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समितिले नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ईश्वर पोखरेललाई निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय बहादुर शाहको कार्यकाल यहि साउन ९ गते सकिएसँगै पोखरेललाई कामुको...
काठमाडौं । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको २४औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । सभा कम्पनीको प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौंमा सम्पन्न भएको हो । कोभिड जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सभा भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न भएको कम्पनीले जनाएको छ...
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स र शंखरापुर नगरापालिका बिच सम्पूर्ण निर्जीवन बीमा सेवा सम्बन्धि सम्झौता
काठमाडौं । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड र शंखरापुर नगरपालिका बिच नगरवासीको भौतिक सम्पत्ति, बालिनाली, पशुपन्छी तथा कृषकहरुको व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गराउने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री...
प्रभु इन्स्योरेन्सको तेस्रो त्रैमाससम्ममा खुद नाफा ४.९५ प्रतिशतले बढेर
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्सको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा खुद नाफामा सामान्य वृद्धि भएको छ । यस अवधिमा नाफा ४।९५ प्रतिशतले बढेर १५ करोड ९८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको...
एनएलजी इन्स्योरेन्सको तेस्रो त्रैमासमा खुद नाफा २१ करोड २८ लाख ३ हजार रुपैयाँ
काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले ३५.२२ प्रतिशतले खुद नाफा वृद्धि गर्दै चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा २१ करोड २८ लाख ३ हजार रुपैयाँ कमाएको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत वर्षको यसै अवधिमा भने १५ करोड...
कोरोनालाई उछिन्दै जीवन बीमा कम्पनी को ब्यापार रेल गतिमा यसरी फस्टायो, कुन कम्पनीले कति भेला पारे ?
कोरोनालाई उछिन्दै जीवन बीमा कम्पनीको ब्यापार रेल गतिमा यसरी फस्टायो, कुन कम्पनीले कति भेला पारे ? कोरोना कहरमै पनि जीवन बीमा कम्पनीहरुको बिजनेश उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ । सञ्चालनमा रहेका जीवन बीमा कम्पनीहरु कोरोनाले जनजीवन...